जर्नल ग्रुप अफ नेपाल
बरिष्ठ स्नायु रोग विशेषज्ञ डा.उपेन्द्र देवकोटालाई पित्ताशयको नलीको अर्बुद अर्थात क्यान्सर भइ हाल उनको उपचारमा आयुर्वेद औषधिको प्रयोग भइरहेको स्रोतले बताएको छ । पाँच महिनासम्म इंग्ल्याण्डमा बसेर उपचार गराएका डा. देवकोटा विदेशको उपचारबाट पनि सफलता नमिलेपछि स्वदेश फर्कि आफ्नै न्यूरो अस्पताल बाँसबारीको बेडमा छन् ।
जीवनमा लाखौं विरामीलाई जीवन दिन सक्षम मानिएका डा.उपेन्द्रले आफूलाई लागेको रोगको भने पत्तै पाएनन् । जब रोगले उग्ररुप लिइसकेको थियो अनिमात्रै उनलाई थाहा भयो र उपचारको लागि विदेश गए । तर विदेशमा पनि उपचारको निश्चित नभएपछि नेपाल फर्किएका हुन् । र अहिले आधुनिक चिकित्साको मात्रै नभएर आयुर्वेदिक औषधि पनि चलाइएको उनको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ । दिनहु राजनीतिक नेता, मन्त्रीदेखि लिएर हजारौं व्यक्तिहरु उनलाई भेट्न न्यूरोमा पुग्ने गरेका छन् ।
आयुर्वेदिक औषधि डा. ऋषिराम कोइरालामार्फत चलाइएको छ । तर, डा. कोइरालाले पनि आधुनिक आयुर्वेदिक औषधिबाट खासै सुधार नभएपछि परम्परागत आयुर्वेद वैद्यले बनाएको औषधि लगेर चलाएको खुल्न आएको छ । नेपालमा परम्परागत आयुर्वेद चिकित्साकर्मीहरु प्रसस्तै रहेको र भलै सरकारले खासै मान्यता नदिएको भएपनि समाजले परम्परागत आयुर्वेद चिकित्सालाई अप्नाउँदै आएको बताइन्छ । आयुर्वेदमा एकाडेमिक र परम्परागत गरी दुईपक्ष रहेको बुझिन्छ ।
शुरुमा डा. कोइरालाले भस्मादि रसादि औषधि चलाएका रहेछन् । त्यो औषधिबाट खासै सुधार आएनछ । झन मिर्गौलामा खराबी भइ क्रेटिनाइन र पेटमा पानी बढेछ । अनि केही सल्लाह गर्न कोइरालाले मलाई बोलाउनु भो । मैले उपेन्द्र डा.सापको उपचारको टिममा मेरो पनि उपस्थिति देखिने हो भने मैले औषधि बनाएर दिन्छु भने, पछि मेरो संलग्नता देखाउन डा. कोइरालाले नसक्ने जस्तो कुरा भएपछि म पछि हटें । उपचारमा पनि यस्तो सिण्डिकेट, यस्तो संकिर्णता ? अहिलेलाई आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा एक वैद्यले भने । त्यस पछि डा. कोइरालाले अर्का परम्परागत वैद्यले बनाएको औषधि ल्याएर चलाएका बुझिएको छ ।
यो जानकारी पाएपछि हामीले अर्का एक जना वैद्यराज दीपक सुवेदीलाई संपर्क गरी केही जिज्ञाशा राख्यौंं । जानलाई आफू डा. उपेन्द्रलाई भेट्न गएको तर आफ्नो औषधि नचलाएको बताए । आफू दुर्घटनामा पर्दा डा.उपेन्द्रले उपचार गरेको सम्झदै वैद्यराज सुवेदीले भने म डा. देवकोटालाई भेट्न चाहीँ गएको हुँ, ज्योतिषी पनि भएको नाताले उहाँको जन्म मिति पनि टिपेर ल्याएर उहाँको दशा ग्रह हेरेपछि आफ्नो सल्लाह फोन गरेर उहाँको फोन रिसिभ गर्ने कार्की थरका व्यक्तिमार्फत दिएको बताए । भेट्मा आयुर्वेद औषधिको बारेमा डा.उपेन्द्रसँग कुरा चाही भएको हो, सुवेदीले भने ।
वैद्यराज दीपक सुवेदीका अनुसार नेपालको परम्परागत आयुर्वेद क्षेत्रसँग कतिपय असाध्य मानिएका रोगहरुको पनि उपचार कला, विद्या र औषधि छन् । तर राज्यको वेवास्ताको कारण त्यो नीधि हराउँदै जान थाल्यो । सबै परम्परागत चिकित्सा कर्मीलाई राज्यले कानूनी दायरामा ल्याएर सम्बोधन गर्न अझै सकेको छैन । बरु विभिन्न खालका प्रताडन गरिरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा परम्परागत वैद्यहरुले अन्यत्रबाट आश मारिसकेका रोगीहरु, घाटमा पुर्याइसकेका रोगीहरुलाई पनि पुनर्जीवन दिएका छन् । यहाँहरुले पनि विभिन्न माध्यमबाट समाचारहरुमा सुन्नु भएको, पढ्नु भएको वा देख्नु भएको होला कि आर्यघाटका वैद्यले अस्पतालले मर्यो भनेर पठाएको विरामीलाई ठिक गरेर घर फर्काए भन्ने जस्ता खबरहरु । हामीले औषधि खुवाएर मिर्गौला रोगीको के्रटिनाइन घटाएका छौं, क्यान्सर रोगीको आयु लम्ब्याएका छौं, नेपाल आयुर्वेदीय संस्थाका सहमहासचिव समेत रहेका वैद्यराज सुवेदीले भने ।
सरकारले वेवास्ता गरेको छ, कानूनि निकास छैन, औषधोपचारको मामला छ, विरामी पनि मान्छे हो तलमाथि पर्नसक्छ । विभिन्न अप्ठ्याराहरु हुन्छन् । त्यसैले आफूहरुले विरामी तथा विरामीका आफन्तिसँग पहिलानै बताएरमात्रै उनीहरुको मञ्जुरीमा औषधि दिने गरेको काठमाडौंको कमलपोखरीमा ॐ आयुर्वेद आरोग्यशाला सञ्चालन गर्दै आएका सुवेदीको भनाइछ ।
सामान्य व्यक्तिको कसले खोजीनिति गर्छ र ? डा. उपेन्द्र देवकोटालाई परेको जस्ता समस्या धेरैलाई पर्ने गर्छ । यस्ता समस्यामा सिण्डिकेट हटाएर, सहकार्यको भावनाले आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, परम्परागत आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा सबैको टिमले मिलेर उपचार दिने हो भने धेरै रोगमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ वैद्यराज सुवेदीको भनाइ छ ।
जर्नल ग्रुप अफ नेपालका अन्य लेख तथा रचनाहरु